China Abenzi beplanethi yokukhanyisa ukukhanya okuphambili kunye nabathengisi | Huayuemei
Ukucaciswa 500 * 240 * 0.2mm
I-LED yangaphakathi 420PCS
Amandla 25.2w / iiPC
Iphepha elikhanyayo leMatrix yiphepha elincinci elincitshisiweyo lokukhanya kwe-LED (i-1 ekhokelwe ukusika) kwaye ixhaphake kakhulu kwisicelo ngaphandle kwemicimbi yokusasazeka. Izixhobo zibandakanya iingcingo zonxibelelwano, iintambo ze-hardwire ezine-2-pin connector iplagi yamadoda kunye nentambo ye-plug-in yeadaptha enesidibanisi somgqomo womfazi.
Uluhlu oludibeneyo lokusebenzisa izinto ezikumgangatho ophezulu ezinje nge-Epistar chip, &, H99.99% intambo yegolide esulungekileyo, ubhedu olunyulu, njengokumiselwa okuqhelekileyo.
2. Sayina ukuKhanya ngasemva ngothotho ekubonakalisweni kwephepha elikhanyayo, kuvumela ukusika okuguquguqukayo (zii-2 ii-LED) nakwindawo yokubhoda ukuya ebhodini / ibhodi-to-power split joint (nge-on-board XH isinxibelelanisi sabasetyhini okanye intambo ye-soldering) kwiimo ezininzi , ezinje ngomgca, isikwere, uxande, idonati, L, T, S, + njl, kunye nomgca oqinileyo kunye namachaphaza, ukufaka igama kwintengiso, kwibhokisi yokukhanya yebhodi yokukhanya okanye kwindawo yokuphakama kokuphakama.
3. Ukulungisa izisombululo ezikhanyisayo ezikhanyisela indawo ezifuna ezona zincinci zezisombululo zokukhanyisa. Iphepha lokukhanya lilungile kwiiprojekthi zokukhanyisa ngasemva apho isisombululo sokukhanya esincinci kwaye esigobekayo sinokufuneka ukuze singene kwindawo ethambileyo, egobileyo kunye neendawo.
4. Yenzelwe kuphela ukukhanya kwangemva komboniso, ibhodi yezaziso kunye nebhokisi yokukhanyisa ebhalwe ngobukhulu obuncinci kunye nobubanzi obucekeceke, ikwasetyenziselwa ukukhanya kweefoto.
1. Izibane zamaphepha eziguquguqukayo ezisebenza ngokugqibeleleyo ukuze zibhenele kubuhle. Ishidi liza nenqaku elithi "cut to fit" elibenza balungele ukufakwa nakweyiphi na ubungakanani.
2. Izibane zamaphepha eziguquguqukayo zilungele iibhokisi zokukhanya ezinzulu eziphantsi, iileta zesitayile se-3D, imiqondiso, ibhokisi yokukhanyisa ye-AD, ukukhanya kwezibane njl.
3. Inokunqunyulwa inye.
4.Umbala we-temp, i-CRI, inokulungiswa ngokokucela kwakho.
6. Samkela iinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM ngokwesicelo sakho.
7. Ukubonelela ngomgangatho ophezulu kunye nenkonzo efanelekileyo emva kokuthengisa.
Egqithileyo Iphaneli yokukhanyisa ekhanyayo eqaqambileyo
Okulandelayo: Iphaneli ye-LED eqaqambileyo ye-2835